'ပုထုဇဉ်သီချင်း' MTV သီချင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ အမျိုးမျိုး ဝေဖန်ပိုင်ခွင့်ရှ? - Yangon Media Group
‘ပုထုဇဉ်သီချင်း’ MTV သီချင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ အမျိုးမျိုး ဝေဖန်ပိုင်ခွင့်ရှ?
မန္တလေးမြို့တွင်ပြုလုပ်မည့်7Concert တစ်ကိုယ်တော်ဖျော်ဖြေပွဲပြုလုပ်ရန် ပြင်ဆင်နေမှုများနှင့်အတူ လတ်တလောတွင် ‘ပုထုဇဉ်’ တေးသီချင်း MTV ရိုက်ကူးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဝေဖန်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီး တေးသံရှင်တင်ဇာမော်ကို ယခုလိုပဲတွေ့ဆုံမေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
မေး-အရင်ကရော မန္တလေးပွဲတွေဆိုတာမှာ အမှတ်တရတွေရှိရင် ပြောပြပေးပါ။
ဖြေ – မန္တလေးကပရိသတ်တွေ အချစ်စမ်းတာကို ကိုယ်တိုင်လည်းကြုံဖူးပါတယ်။ ပျော်ဖို့လည်းကောင်းခဲ့ပါတယ်။ သူတို့တကယ်ချစ်ပြီဆိုရင် တကယ်ကိုအားပေးကြတယ်။ ကိုယ်အဆိုတော်စဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ မန္တလေးမှာ ပွဲတော်တော်များများသွားဆိုဖူးပါတယ်။ အဲဒီမှာစပြီး မန္တလေးပရိသတ်တွေရဲ့ပွင့်လင်းတဲ့ အားပေးမှုမျိုးကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။ မန္တလေးမှာဆိုတဲ့ပွဲတွေအကုန်လုံး အဆင်ပြေပြေနဲ့ အေးအေးဆေးဆေးဆိုခဲ့တယ်။ တစ်ပွဲကတော့ အခုချိန်အထိ အမှတ်ရနေပါတယ်။ အဲပွဲတုန်းက Rock သီချင်းတွေကို တစ်ရက်ဖျော်ဖြေမယ်။ Pop သီချင်းတွေကို တစ်ရက် ဖျော်ဖြေမယ်ပေါ့နော်။ စုစုပေါင်း နှစ်ရက်ဖျော်ဖြေမယ့်ပွဲကြီးမှာ ကျွန်မက Rock သီဆိုဖျော်ဖြေတဲ့ရက်မှာပါဝင်တယ်။ ဆိုတော့မယ့် အချိန်မှာ အောက်ကပရိသတ်တွေ မပြေမလည်ဖြစ်ပြီး မဆိုဖြစ်လိုက်ပဲပြန်လာရတာတော့ တစ်ခါကြုံဖူးပါတယ်။ တော်တော် လေးတော့ကြာပါပြီ။ ၁၉၉၇-၁၉၉၈ ခုနှစ်လောက်မှာပါ။
မေး-သီချင်းတွေကိုရော တစ်ပွဲနဲ့တစ်ပွဲမထပ်ရအောင် ဘယ်လိုရွေးချယ်ထားလဲ။
ဖြေ-သီချင်းကတွေကတော့ ကျွန်မအဆိုတော်သက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာထွက်ခဲ့တဲ့ သီချင်းပေါင်း အပုဒ်ရေနှစ်ရာကျော်လောက်တော့ရှိပါတယ်။ အဲဒီအထဲကမှ ပရိသတ်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်တဲ့သီချင်း တွေကတော့ အပုဒ် ၃ဝ နဲ့ ၅ဝ ကြားမှာရှိပါတယ်။ တချို့သီချင်းတွေကတော့လည်း ကိုယ်တိုင်က တော့ ကြိုက်လို့ဆိုဖြစ်လိုက်တယ်။ ပရိသတ်တွေ သိပ်ပြီးသတိမထားဖြစ်လိုက်တဲ့ သီချင်းတွေလည်းရှိပါတယ်။
မေး – ပုထုဇဉ်သီချင်း MTV နဲ့ ပက်သတ်ပြီး ဝေဖန်နေတာတွေလည်းရှိတယ်နော်။
ဖြေ-ပုထုဇဉ်သီချင်းလေး MTV ရိုက်တဲ့အချိန်မှာ ဒါရိုက်တာထူးပိုင်ဇော်ဦးက သူရဲ့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးလေးနဲ့ ရိုက်ချင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ ဒီ MTV လေးက ကျွန်မရဲ့အနုပညာသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ အရမ်းကို အမှတ်တရဖြစ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ပရိသတ်အများကြီးက အနုပညာရှင်တစ်ယောက်တည်းကို အားလုံးကကြိုက်ချင်မှလည်းကြိုက်မှာပါ။ နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကတော့ တစ်ခါတလေမှာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် တွေးခေါ်ပုံတွေလည်း တူရင်တူနိုင်ပါတယ်။ တိုက်ဆိုင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်း အမျိုးမျိုးဝေဖန်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ကူးချတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုလည်းရပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် တစ်ဖက်ကပြန်တွေးပြီး သြော် သူတို့အတွေးတူသွားတာပါလားလို့တွေးရင်လည်း တွေးလို့ရပါတယ်။ ဒါရိုက်တာထူးပိုင်ဇော်ဦးက တော်တဲ့ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက် ကျွန်မကိုယ်တိုင်က အခုချိန်ထိ Cover Song တွေဆိုနေတဲ့ အဆိုတော်တစ်ယောက် ဖြစ်တာကြောင့် ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ ကိုယ်ပိုင်ဆိုပြီးတော့ လက်သီးလက် မောင်းတန်းချင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကလေးဘဝတည်းက Cover Song တွေနဲ့ကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ အင်္ဂလိပ်သီချင်းတွေဆိုရတာအရ သာတော်တော်လေးတွေ့ခဲ့ပါတယ်။
လက်မည်းကြီးများကို ထိရောက်စွာ ဖော်ထုတ် အရေးယူ
အောင်ပန်းမြို့၏အထင်ကရ ဗိုလ်မှူးကြီးဗထူးကျောက်တိုင်နှင့် နာရီစင်ကို ကားလမ်းတိုးချဲ့ရာ၌ မ??